अस्ताए चलचित्रका लोकप्रिय नायक ‘एकचोटि ‘कोहिनुर’ हेरिदिनू’ ः श्रीकृष्ण श्रेष्ठ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अस्ताए चलचित्रका लोकप्रिय नायक ‘एकचोटि ‘कोहिनुर’ हेरिदिनू’ ः श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
२०७१ श्रावण २६, सोमबार ०५:०६ गते
यही असार २३ गते श्वेता खड्कासँग बन्धनमा बाँधिएका नेपाली चलचित्रका नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्यु साउन २५ गते बिहान ५ बजे गंगाराम हस्पिटल दिल्लीमा भएको छ । जीवनको दुई दशकभन्दा पनि बढी समयदेखि नेपाली चलचित्रमा लागिपरेका श्रीकृष्णलाई डिप निमोनियाकै कारण चलचित्र क्षेत्रले गुमाउनु परेको छ ।
२०४५ सालमा ‘भुमरी’ चलचित्रबाट पर्दामा देखिएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ‘नाता’ चलचित्रबाट हिरोमा अभिनय गरेका हुन् । नेपाली चलचित्रमा एकछत्र रुपमा छाउँदै आएका श्रेष्ठलाई यसअघि पनि रक्तक्यान्सर भएको थियो । तर, पनि रक्तक्यान्सरले उनको फिल्मयात्रालाई पूर्णविराम लगाएन, झन् ऊर्जा दिने काम ग¥यो ।
नेपाली चलचित्रमा छवि ओझाले श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई ‘नाता’ चलचित्रबाट अगाडि ल्याए । त्यसपछि श्रीकृष्णले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । नेपाली चलचित्रप्रेमीको मन जित्दै उनी सबैका मनमनमा बस्न सफल भए । उनले आफ्नो चलचित्र हेर्नैपर्दछ, उनको चलचित्रमा केही नयाँपन हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गरेका थिए ।
आफ्नो जीवनको ४७औँ वसन्तमा हामीबाट पराई हुन पुगेका श्रेष्ठ साह्रै मिलनसार, इमानदार एवम् कामप्रति बफादार हुनुका साथै सहयोगी भावनाका पनि थिए । नायक श्रेष्ठले झन्डै १५ वर्ष नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा सरकारी जागिर पनि खाएका थिए ।
विवाहपछि हनिमुन मनाउन सिमला गएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नेपाल फर्किएनन् । उनले आफ्नो अन्तिम श्वास नेपाल आमाको काखमा फेर्न पाएनन् । सायद, उनमा पनि इच्छा थियो होला, नेपाल आमाको काखमा मर्ने । तर, भावीको लेखा नै अनौठो छ, भारतको गंगाराम हस्पिटलमा उनले मृत्यु वरण गर्नुप¥यो ।
नेपाली चलचित्रलाई ‘आफन्त’, ‘आफ्नो मान्छे’, ‘सुखदुःख’, ‘ए ! मेरो हजुर’, ‘हामी तीन भाइ’ र ‘कहाँ भेटिएला’जस्ता ५१औँ र १००औँ दिन मनाउन सफल चलचित्र हामीलाई दिएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले नेपाः मुभिज स्थापना गरेर ‘कहाँ भेटिएला’ चलचित्रको निर्माण गरेका थिए, जुन सिनेमा अत्यधिक सफल नै बनेको थियो । हालै श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निर्माणमा ‘कोहिनुर’ चलचित्र विभिन्न हलहरुमा साउन २३ गतेबाट प्रदर्शनरत छ । यस चलचित्रको प्रमोसनमा पनि श्रीकृष्णले समय दिन सकेनन् । कारण थियो, पापी डिप निमोनिया । आफ्ना चलचित्रबाट सबैको मन जित्न सफल श्रीकृष्णले पर्दामा सबैलाई रूवाएका थिए । उनका धेरैजसो चलचित्र दर्शकलाई रूवाउन सफल भएका थिए । चलचित्रमा मरेको रोल गरेर दर्शकलाई रूवाएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले २०७१ साउन २५ गते सदाका लागि हामीलाई रूवाएर गएका छन् ।
आफ्ना चलचित्रबाट धेरै पटक उत्कृष्ट अभिनेता हुन सफल श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई अल्पायुमै पापी यमराजले हामीबाट लगिछाड्यो । उनले आफू मृत्युशैयामा छटपटिँदा पनि उनी निर्मित ‘कोहिनुर’लाई हेरिदिन सम्पूर्ण दर्शकलाई आग्रह गरेका थिए ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चलचित्र प्रायः नारीप्रधान, सामाजिक विषयवस्तु प्रधान, कारूणिक भावनाले ओतप्रोत रहेका थिए । उनीसँगै उनका यी भावनात्मक चलचित्र ओझेलमा पर्ने हुन् कि ? स्व. निर्देशक शिव रेग्मी र स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बाबुछोराजस्तै रहेका थिए । तर विडम्बना ! रेग्मी र श्रेष्ठलाई पापी कालले छोडेन, लगेरै छाड्यो । अहिले श्रेष्ठको निधनले सिंगो नेपाली चलचित्रलाई ठूलो बज्रपात भएको छ । उनको अभाव चलचित्र क्षेत्रमा खड्किनै रहने छ । अन्ततः उनको दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै उनलाई हार्दिक समवेदना तथा श्रद्धासुमन !